ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်ကျန်းမာရေး | Page3| Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
21.4.2019 | ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်ကျန်းမာရေး
မိခင်​နို့တိုက်တယ်​ဆိုတာ တကယ်​​တော့ ထင်​သ​လောက်​မလွယ်​ကူဘူး​နေ်ာ။ ​မေ​မေဘာ​တွေစားရမလဲ? ဘယ်​​လောက်​စားရမလဲ? ​မေ​မေစားတဲ့အစားအ​သောက်တွေ​က က​လေးကိုဘယ်...
တီဘီရောဂါ ခံစားခဲ့ရသူ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်း
ကေသီက သူမကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ကစပြီးတော့ အအေးမိသလိုမျိုး အမြဲတမ်း နေလို့မကောင်း ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အဲနောက်မှာတော့ ချောင်း အမြဲဆိုးလာပြီးတော့ ညဘ...
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ရေနွေးနဲ့ရေချိုးတာ ကောင်းပါ့မလား
13.4.2019 | ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်ကျန်းမာရေး
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာရေနွေးနဲ့ရေချိုးတာဟာ ကြွက်သားနာကျင်ကိုက်ခဲတာတွေကို အထူးသက်သာစေတဲ့အတွက် သိပ်ကောင်းတဲ့အကြံလို့ ထင်ရပါတယ်။
ကလေးမှာ မွေးရာပါ ချို့ယွင်းတာတွေ ပါမလာအောင် ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲ
10.4.2019 | ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်ကျန်းမာရေး
မွေးရာပါချို့ယွင်းချက်တွေဟာ ကိုယ်ဝန်ပထမပိုင်းကာလ ၃ လအတွင်းမှာ ဖြစ်တတ်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ကို ဘယ်လိုပဲဂရုစိုက်စိုက် ၄% သော ကလေးတွေမှာ မွေးရာပါချိ...
မီးတွင်း သွေးသွန်တာ ဘာကြောင့်လဲ
7.4.2019 | ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်ကျန်းမာရေး
လောကကြီးထဲကို အသစ်စက်စက် ရောက်ရှိလာတဲ့ သားသား သို့မဟုတ် သမီးလေးတွေကို မွေးဖွားပြီးတဲ့အခါ မိခင်တွေအနေနဲ့ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ ပင်ပန်းနွမ်းလျသွားတတ်ကြပါ...
6.4.2019 | ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်ကျန်းမာရေး
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေ အတော်များများ၊ အထူးသဖြင့် သားဦးကိုယ်ဝန်တွေဟာ သိချင်တာတွေ အရမ်းများနေလိမ့်မယ် ထင်တယ်နော်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီဆိုကတည်းက အြေ...